OpenAPI | Zeevou Kubatanidzwa
Kubatanidzwa » OpenAPI
OpenAPI & Zeevou Kubatanidzwa
Yedu OpenAPI yave kuwanikwa kutambanudza yedu inogara ichikura runyorwa rwezvakakosha zvitsva integrations iyo yedu Partner Hosts ingangoda kusimudzira kugona kwemabhizinesi avo. Iye zvino unogona kubatanidza account yako yeZeevou nechero software yaunoda uye nekugovana dhata zvisingaite kuburikidza neyedu OpenAPI (Chishandiso Chirongwa Chekuita) Yedu OpenAPI inowanikwa kune vanogadzira, vanopa software, uye vatengi vanoda kuvaka kubatana nesu, kuyanana nesystem yedu, kusimudzira mabhizinesi avo, uye kuendesa yakakwira mwero weotomation.
Saina seMubatanidzwa Partner
OAuth 2.0 Inodzoreredza URL
Ndatenda nekukumbira kuve Zeevou Yekubatanidza Partner. Ndokumbira utarise mae-mail kune anotevera matanho.
Pane dambudziko kunyoresa chikumbiro chako. ndapota edza zvakare kana kubata system maneja.
Unganidza kune imwe software yesarudzo
Wana mukana wepamusoro weotomesh
Svitsa kuna Zeevou uye ubatanidze nesu
Chii chinonzi OpenAPI?
Chii chinonzi OpenAPI chinoshandiswa?
Chii chinonzi OpenAPI zviyero?
Chii chinonzi OpenAPI faira?
Zeevou's OpenAPI inoshanda sei?
Zeevou's OpenAPI inobatsira sei?
Ndeapi mabhenefiti ekushandisa OpenAPI kuburikidza neZeevou?
OpenAPI chiyero chinogamuchirwa pasi rose kutsanangura yazvino API. OpenAPI, iyo inozivikanwawo seye API yeruzhinji, ndeye yeruzhinji "Kunyorera Chirongwa Chekushandisa" kana icho chinoshandiswa nevagadziri mahara kuwana mukana kune mamwe emukati mashandiro esoftware ekushandisa uye webhu services. MaAPI anobatsira manyorerwo kutaurirana uye kugovana dhata.
OpenAPI ine mabhenefiti makuru kune vese vatengi uye vanogadzira. Nekudaro, kushandisa OpenAPI mumabhizinesi akasiyana kunogona kusimudzira kugona kwavo uye kuchengetedza vashandi nguva, simba nemari nekuunza yakakwira mwero weotomation. Iwe unogona kuwana pazasi mabhenefiti ekushandisa OpenAPI mubhizimusi rako renguva pfupi rendi:
Kushandisa OpenAPI kunochengetedza nguva yevagadziri uye kunoderedza mutengo wekunyora nekuti kudiwa kwekuhaya kumberi uye ekudzosera kumashure vanogadzira kunodzora zvakanyanya.
Iine OpenAPI, zvikanganiso zvekukodha zvichadzikiswa.
OpenAPI inogona kuita sedhatabhesi iyo inoderedza mutengo wekushanda uye kushambadzira kwemabhizinesi.
Nekushandisa OpenAPI mumaitiro ekugadzirisa zvivakwa, unogona kuongorora uye kuvimbisa mhando nekuti OpenAPI inokutendera kuti uedze iyo API sisitimu uye uve nechokwadi chekuti zvese zviri kushanda nemazvo.
OpenAPI ine chimiro - OpenAPI Tsananguro kana OAS - iyo inobvumidza vese vashandisi uye michina kuti inzwisise izvo sevhisi iri kupa uye chii chayo capabilitIes. Neiyi nzira, ivo havafanirwe kuve nekwaniso yekuwana sosi kodhi kana chero imwe zvinyorwa izvo zvinoita kuti maitiro acho awedzere kutora nguva uye kuoma. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezvazvo kuburikidza Zvinyorwa zveOpenAPI.
Iyi faira yeJSON yaunogona kurodha pasi kubva Zvinyorwa zveOpenAPI.
Zvinyorwa zveZeevou nemaAPIs zvakavakirwa paOpenAPI. Iwe unogona kusaina semubatanidzwa wekudyidzana uye shandisa OpenAPI kubatanidza software yako kana app kuZeevou.
OpenAPI ndiyo yakajairwa, saka chero API inoshandisa OpenAPI inotevera maitiro akanakisa uye mabhenefiti kubva mairi.
Zeevou's OpenAPI inokutendera iwe kuvaka tsika kubatanidzwa kuZeevou. Kunyangwe iwe uri Zeevou Patron uyo anoda kuburitsa imwe data seimwe-kure, kana paichienderera mberi, kana kumhanyisa imwe software software uye uchida kubatsira kugadzirisa mashandiro evatengi vako, Zeevou's OpenAPI inokutendera iwe kuti udaro.
SaZeevou Patron, iwe unogona kushandisa iyo OpenAPI muzviitiko zvakasiyana. Semuenzaniso, kana iwe uchida kudhonza zvimwe zvebhuku mameseji kuti umhanyisa yakagadziriswa ongororo, unogona kukwira kumusoro kune yedu API nekungobaya mashoma. Ipo iwe uchikwanisa kuburitsa rumwe ruzivo zvakananga kuburikidza nekunze kwedu kuita basa muZeevou, izvi zvinokutendera iwe kumhanyisa yakanyanya yakagadzirirwa mubvunzo. Zvakare, kana chiri chinhu chaunoda kuita chichienderera mberi, saka kusangana uku kwaizokubatsira iwe kuchengetedza yakawanda nguva uye kunetsekana. Imwe kesi yekushandisa ingave yekuda kuvaka yetsika yakananga kubhuka webhusaiti kune yako STR kana kubhadharisa zororo, uye shandisa maficha eZeevou mumashure. Iwe unogona kudhonza nyore nyore zvese zvezvenyu zvinyorwa uye wotendera vashanyi kubhucha kugara kwavo, pamwe nekukwikwidza zvimwe zvigadzirwa nemasevhisi kuburikidza newe pachako webhusaiti.
SeMubatanidzwa Partner, iwe unogona zvakare kuwana zvakaringana chero chikamu cheZeevou's functionalities kuburikidza neyedu OpenAPI. Kunyangwe iwe uchida kudhonza kubhuka, mabasa, kana ruzivo rwevaeni, yedu OpenAPI inopa yakazara uye yakazara kuwana. Kana paine chero minda iwe yaunoda yekubatanidza kwako iyo isati yavapo, tisiyirei mutsetse uye tichaita nepatinogona napo kuti tiwedzere mukati mawo. OpenAPI yedu yakavakwa zvichibva paruzivo rwazvino RESTful tekinoroji kuti ikwanise nguva dzakanakisisa dzekupindura uye kugadzikana kwekubatana.
Ngatitiiteii Kukusimudza Kwakakura Kwako!
Shandura bhizinesi rako uye uwane nguva yekukura.
Saina Up to zeevou